Singapore - Making the Cut" - Guards Conversion Course
"Churches should not be built in Islamic countries, say preachers
Taking 15,000 quick steps in full battle order that weighs almost 30kg is anything but easy. This is just one of the key tasks every trainee must pass to go to the next level of training in this intensive and tough 3-week Guards Conversion Course.
Making the Cut looks at 122 full-time national servicemen and regulars from various SAF units, coming together forasingle purpose, to attain the coveted khaki beret and to be part of the Guards family. In this first episode, watch how the Guardsmen trainees adapt to the high standards of discipline and training required of every Guardsman and their introduction to the dreaded 12km fast march.
And watch how some try and overcome their fear of heights when they're introduced to cliff rappelling, every Guardsmen's staple of operations.Continue to Episode2until Episode 7
After watching the Singaporeans, watch the American Marines on Surviving the Cut, Marine Recon , see the difference!!
Posted: 27 Jul 2012 08:53 AM PDT
(Mohabatnews) - According to recently released statistics, in the past few weeks over 75 female children under 10 were forced to marry much older men. In 3929 cases, bride and groom were both under 14. Inadiscussion of the issue organised by the Khabar Online news website, conservative law-maker and spokesperson for the Majles committee Mohammad Ali Isfenani said: "Before the revolution girls under 16 were not allowed to marry.
Parents determined to get around the law would often tamper with their daughter's birth certificate. Under the previous constitution, people were legally regarded as adults when they were 18. After the revolution the age at which children were regarded as going through puberty was lowered to9for girls and 15 for boys. "
He added: "As some people may not comply with our current Islamic legal system, we must regard9as being the appropriate age foragirl to have reached puberty and qualified to get married. To do otherwise would be to contradict and challenge Islamic Sharia law." He also confirmed that under his chairmanship the legal committee of the Majles would seek to change the current legislation.
Posted: 27 Jul 2012 08:48 AM PDT
From the Arab Times, July 27
KUWAIT CITY, July 26: A group of Islamic preachers claimed that churches should not be built in Islamic countries particularly in the Arabian Peninsula following the issuance of an approval for constructingachurch in Jleeb Al-Shuyoukh, reports Al-Watan Arabic daily. Undersecretary of Ministry of Awqaf and Islamic Affairs Mutlaq Al-Qarawi stressed that the ministry is not responsible for issuing licenses for building churches, and only receives the applications for licenses, which they refer immediately to the Municipality for review.
Meanwhile, Sheikh Nazem Al-Misbah pointed out that the Fatwa and Legislation Department should be questioned for such issues, stressing that based on his knowledge about Islam, it is forbidden to build churches in the Arabian Peninsula. Adding to the Sheikh Nazem's comment, Sheikh Mohammad Humoud Al-Najdi said building churches in Kuwait should be prohibited, as Kuwait isapart of the Arabian Peninsula. Furthermore, Sheikh Sayed A-Rifae Al-Husseini expressed displeasure towards Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, and the Municipality for approving the construction ofanew church in Jleeb Al-Shuyoukh, stressing that it is not permissible as per the Sharia.
Posted: 27 Jul 2012 11:01 AM PDT
"Selama ini masyarakat beranggapan bahawa kaum Cina lebih mementingkan ekonomi daripada pelajaran dan ia tidak benar kerana bagi mereka sistem pendidikan Cina harus diberi keutamaan.
"Bagi mereka ekonomi adalah keperluan kedua, walaupun banyak pihak menyatakan kaum Cina lebih mementingkan ekonomi," katanya.
"Mereka beranggapan sistem yang diperkenalkan itu lebih menjurus kepada Umno kerana majoritinya bangsa Melayu yang menguasainya.
"Ini termasuk jawatan di dalam Kabinet, sistem pentadbiran negara atau apa jua jawatan yang diperkenalkan kerajaan," katanya. -SH
Posted: 27 Jul 2012 07:49 AM PDT
This was decided inameeting here in the DVS' headquarters this afternoon after the Malaysian Animal-Assisted
Therapy for the Disabled and Elderly Association (PETPOSITIVE)
Posted: 27 Jul 2012 08:08 AM PDT
This isaVERY SERIOUS ALLEGATION. Myanmar Government should not only deny but need to take action on those Master-minds of the killing machines that was activated round about By election time. Whether right or wrong it really stroke Myanmar Muslims in different regions. Main stream media cover-up, gov failed to act or protect the5Muslim organizations' official complaints.
If Hmu Zaw, U Thein Sein and Government failed to act on the "Killing Machine" the world would WRONGLY regard or suspect that they were behind that machine or agree to or protecting that RADICAL TERRORIST group. FIRST of all they need to stop the HATE SPEECHES by the Media and Monks.
"The regime-owned killing machine relentlessly works on striking Muslims in different regions, with Rohingya at the forefront…This isanew racial purification trend against Muslims."
How did this genocide start and what happened afterwards? On June 3, 2012, eight Muslim pilgrims along with one escort, one bus helper, and one woman were killed byaRakhine mob in Taungup township in southern Arakan [Rakhine] State. Five others escaped the massacre…The gang of Rakhine terrorists stopped the bus, which had the license plate7(Ga) 7868, at an immigration gate, and called, "Come down all, if there are any foreigners," while holding lethal weapons…Then, they started to beat the Muslim pilgrims and dragged them from the bus to the road, where an organized gang of more than 300 Rakhine terrorists beat the Muslims until they died. The gang had been standing at the immigration gate, but no authorities came out to stop the massacre. 
These messages and interpretations of events are starting to cause regional ripple effects. On July 13, 300 members of the Islamic Defenders Front (FPI) and Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) in Indonesia threatened to storm the Myanmar embassy in Jakarta. One protest leader said overaloudspeaker: "If embassy officials refuse to talk with us, I demand all of you break into the building and turn it upside down … Allahu Akbar … Every drop of blood that is shed fromaMuslim must be paid back. Nothing is free in this world … FPI is ready to wage jihad … Go to Myanmar and carry out jihad for your Muslim brothers."
Posted: 27 Jul 2012 04:14 AM PDT
ဗြိတိသျှ တို့က မြန်မာ နိုင်ငံကို အရှေ့အိန္ဒိယ ကုမဏီ ဖြင့်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသည်။ ၄င်းတို့၏ ရှေ့တန်း တိုက်ခိုက် စစ်သား အများစုမှာ အိန္ဒိယ စစ်သားများဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကို ဗြိတိသျှတို့ တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ ကို ဗြိတိသျှ ပိုင် အိန္ဒိယ နိုင်ငံ၏ ပြည်နယ်တစ်ခုအဖြစ် ထားရှိခဲပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာ နိုင်ငံအတွင်းသို့ အိန္ဒိယ သား များအလုံးအရင်း ဖြင့် ၀င်ရောက်လာတော့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့သော စစ်သားများ တွင် လည်းကောာင်း ၊ မြန်မာပြည်နယ် အတွင်း ၀င်ရောက်လာသော အိန္ဒိယ သားများတွင် လည်းကောင်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များလည်း ပါဝင်လာပါသည်။ယင်းအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များသည် မြန်မာဘုရင်များလက်ထက်က ရှိနှင့်နေသော မြန်မာ တိုင်းရင်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနှင့် ဘာသာတူချင်းဖြစ်၍ အလွယ်တကူအိမ်ထောင်ပြုကြပြီ၊ သားမြေးမြစ်များ ပြန့်ပွားလာခဲ့သည်။ သို့သာမက အိန္ဒိယ မှဝင်ရောက်လာသူ ငွေရှင် ကြေးရှင် ကြီးများက ဘာသာမတူ သူ မြန်မာ တိုင်းရင်းသူများနှင့် လည်း အိမ်ထောင်ပြုသည်များရှိခဲ့ကြပြီး၊ မွေးဖွားလာသော သားမြေးမြစ် များမှာ အများအားဖြင့် ဘခင်ဖက်လိုက်ကာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များဖြစ်သွားကြသည်။ ယခုမြန်မာနိုင်ငံအနှံအပြားတွင် ရှိနေကြသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များမှာ မြန်မာဘု၇င် အဆက်ဆက်က ရှိနှင့်နေခဲ့သူများ၊ ဘခင်ဖက်လိုက်ကာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ဖြစ်လာသူများ ဖြစ်ပါသည်။
အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များကို ခေါ်ဝေါ်ပုံ
မြန်မာဘုရင် ခေတ်က အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်မြန်မာများကို ကုလား၊ ကုလားပျို၊ ပသီ၊ ပသီကုလား၊ ပန်းသေးတရုတ် ကမန်၊ မြေတူးသား၃၇၀၀ အဆက် စသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ ကမန်မှာ ယခုအခါ တိုင်းရင်းသားတစ်မျိုးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ခံနေရပြီဖြစ်ပါသည်။ ဘင်္ဂါလီဟု သော အခေါ်အဝေါ်လုံးဝမရှိခဲပါ။ ဗြိတိသျှခေတ်တွင် အိန္ဒိယ ဒေသအသီးသီးမှ ၀င်ရောက်လာကြသော အစ္စလာမ်ဘာသာ ၀င်များက မိမိတို့ ၀င်လာရာ ဒေသကိုအစွဲပြု၍ အိန္ဒိယတွင် ပင်အခေါ်အဝေါ်မရှိသော လူမျိုးနာမည်များ တီထွင်လာကြသည်။ ဥပမာ – စုရာသ်ဒေသ မှ ၀င်လာသူများကို မိမိတို့ကိုယ် ကို စူရတီ လူမျိူး ဂူဂျာရသ် ဒေသမှ ၀င်ရောက်လာသူများက မိမိတို့ကိုယ်ကို (ဂူဂျရသီ) မေမန်လူမျိုး၊ တမိလ်နာဒူးဒေသမှ ၀င်ရောက်လာသူများက ကျူလီယာ လူမျိုး၊ စသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်လာကြသည်။ ထိုခေတ်တွင် အရှေ့ဘန်ဂေါလ် (ယခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်) မှ ၀င်လာသူများက မိမိတို့ကိုယ်ကို ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးဟု စတင်ခေါ်ဝေါ်လာကြသည်။
ဗြိတိသျှတို့က မည်သည့်ဒေသ မှ ၀င်လာသည်ဖြစ်စေ ၊ ဘုရင်လက်ထက် ကရှိနေသူ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်အားလုံး ကို "မဟာမေဒင် လူမျိုး" ဟု ခေါ်ဝေါ်လိုက်ကြသည်။ ထို့အတူ မြန်မာ တိုင်းရင်းသား တို့က ၄င်းတို့အားလုံးကို "ကုလား" ဟု ခေါ်ဝေါ်လိုက်ကြသည်။ သို့ရာတွင် ၄င်းတို့က မိမိတို့ကို "မဟာမေဒင်" ဟု လည်းကောင်း ၊ "ကုလား " ဟု ခေါ်ဝေါ် သည်ကို လည်းကောင်း လုံးဝ မနှစ်မြို့ကြချေ။ "မဟာမေဒင်" ဟုသည် မှားယွင်းသောအသုံးအနှုန်းသာ ဖြစ်၍ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာ ၀င်အားလုံးက လက်မခံနိုင်ပေ။ "ကုလား" ဟူသည် အိန္ဒိယ စကား (ကာလား – အမည်း၊ အသားမည်း) ဟု အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်သဖြင့် နှိမ့်ချသော အသုံးအနှုံးဖြစ် သည်ဟု ယူဆသဖြင့် မြန်မာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များက မနှစ်မြို့ကြပေ ။
ဗြိတိသျှခေတ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်ကြီးပေါ်ပေါက်သကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တိုင်းကို ဗမာ မွတ်ဆလင်မ် ဟု တစ်ပြေးညီ ခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြင့် အိန္ဒိယ ကုလား နှင့် လမ်းခွဲလိုက်ကာ "ဗမာ မွတ်ဆလင်မ် ကွန်ဂရက်"ကြီး ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်ကြသည်။ ဦးဆောင်သူမှာ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဆရာကြီးဦးရာဇတ် ဖြစ်ပါသည်။ ဗမာ မွတ်ဆလင်မ် တို့က ကုလား ဟူသည် မြန်မာနိုင်ငံကို သစ္စာမခံသော အိန္ဒိယ တိုက်နယ် သားများနှင့် အနွယ်အဆက်များဟု ယူဆ ပြီး ဗမာမွတ်ဆလင်မ် ဟု သည်မြန်မာနိုင်ငံကို သစ္စာခံသော (မည်သည့် အနွယ်အဆက်မှမဆို ဆင်းသက်လာသည့် ) အစ္စလာမ် ဘာသာ ၀င်မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဟုသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွတ်လပ်ရေးရပြီး ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနု လက်ထက်တွင် နိုင်ငံရေးအသွင်ဆောင်သော ဗမာ မွတ်ဆလင်မ်ကါန်ဂရက် ကို ဘာသာရေး ၊လူမှုရေး သီးသန့်သာ ဆောင်ရွက်သော "အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီ " အဖြစ်ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဆရာကြီးဦးရာဇတ် ကျဆုံးသွားပြီးနောက် ထိုအဖွဲ့ကို ဖဆပလ ခေတ် တရားရေးဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်လတ် (မြောင်းမြသား) က ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
များမကြာမီ ဖဆပလ ခေတ် ၀န်ကြီးတစ်ပါး ဖြစ်သော ဦးရှာရှစ် ( သခင်နု၊ သခင်အောင်ဆန်း၊ တို့နှင့်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ တွင် တွဲဖတ် ဦးဆောင်ခဲ့သူ ) က "ဗမာ မွတ်ဆလင်အဖွဲအချုပ်ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးအမြင်ရှိသော လူငယ်များကလည်း ဗမာမွတ်ဆလင်မ် လူငယ်အဖွဲ့ချုပ်" ကို တည်ထောင်ပါသည်။
ယခုခေတ်တွင်လည်းအစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီ ၊ မြန်မာမွတ်ဆလင်မ် အဖွဲ့ချုပ် ၊ မြန်မာ မွတ်ဆလင်မ် လူငယ်အဖွဲ့ချုပ် တို့နှင့် (န၀တ) ခေတ် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ၀င် ဆရာချယ် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သော "မြန်မာ မွတ်ဆလင်မ် အမျိုးသားရေးရာအဖွဲ့ချုပ် " တို့ကို နိုင်ငံတော်က တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုထားဆဲဖြစ်သည်။
အထက်တွင် တင်ပြချက်များ ကိုထောက်ရှုလျှင် ရခိုင်ပြည်နယ်အမတ်မင်း ဦးဌေးဝင်း မေးခဲ့သော မေးခွန်းပါ။ "ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ မြန်မာ မွတ်ဆလင်မ်များ "ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကို သစ္စာခံနေသေ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ရခိုင် ဒေသ သားမျာသာ ဖြစ်ရပါမည်။ တဖတ်နိုင်ငံမှ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်နေထိုင်ကြသော ဘင်္ဂါလီ များကို မြန်မာ မွတ်ဆလင်မ် များက မည်သည့်အခါကမှ မြန်မာမွတ်ဆလင်မ် ဟုခေါ်ဝေါ်မည် မဟုတ်ပေ။ ထို့သို့ ခေါ်ဝေါ်လိုက်လျှင်လည်း သမိုင်း ဖြစ် ရပ်၊ လက်တွေ့ ဖြစ်ရပ်များနှင့် မကိုက်ညီ သဖြင့် မည်သည့် မြန်မာမွတ်ဆလင်က မှ လက်ခံ မည် မဟုတ်ပေ။
သို့ပါ၍ မြန်မာ မွတ်ဆလင်မ် ဟူသည် ရခိုင်ပြည်နယ်၊မောင်းတော ဒေသ အတွင်းမှာ နေထိုင်ကြသော ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများ ကို ရည်ညွန်းပြောဆိုခြင်းဟု ယူဆသည့် မြောင်းမြသား ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီ ယူဆချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးပါရန် မြောင်းမြ သား မောင်ဝတ်လုံ က အနူးအညွတ်မေတ္တာ ရပ်ခံ အကိုးအကာ အထောက်အထားများဖြင့် တင်ပြအပ်ပါသည်။
မောင်ဝတ်လုံ ( မြောင်းမြ)
Posted: 27 Jul 2012 04:08 AM PDT
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အီစလံဘာသာဝင်များကို အထူးအရေးပေးခြင်းခံနေရဆဲဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတောင် ဘက်ရှိ ပတ္တာနီ နရသီဝ ရဟေ ဟူ၍ ပြည်နယ်သုံးခုတွင် မူစလင် အများစု ရှိသည်။ ထိုင်းဘုရင် သည် မူစလင် တို့၏ ဘာသာရေးဂိုဏ်ချုပ်ကို တိုက်ရိုက်ခန့်ပေးသည်။ ဂိုဏ်းချုပ် သည် အာဏာ အပြည့်အ၀ ရှိသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ကက် ဘိနက် တွင်ဝန်ကြီး ၃ ၄ ဦးမှာ အစဉ်အမြဲမွတ်စလင် ကိုခန့်လေ့ရှိသည်။အာရဗ်မူစလင် နိုင်ငံများ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ အကျိုးရှိနေသည်။ မူစလင်တို့၏ ဘာသာရေး တက္ကသိုလ်မှာ ဘန်ကောက်မြို့တွင် ခန်းနားစွာရှိနေသည်။ ဤသို့ပင် ကမ္ဘောဒီယား တွင်လည်း မူစလင်များကို အရေးပေးခြင်းရှိသည်။ ကွန်မြူနစ် ပိုပေါ့လက်ထက်တုန်းက မူစလင်များသိန်နှင်ချီ အသတ်ခံခဲ့ရသည်။ ယင်းအကြောင်း ကိုနောက်တက်လာသည့် အစိုးရက ကမ္ဘာသိအောင် ဖြန့်ချီခဲ့သည်။ ဤနှစ်နိုင်ငံလုံးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ လူအများစုရှိသောနိုင်ငံများဖြစ်သည်။
ယင်းနှစ်နိုင်ငံထက်ပိုမို၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ နိုင်ငံကား သီဟိုကျွန်း သီရိလင်္ကာပင်ဖြစ်သည်။ သီရိလင်္ကာတွင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးဆင်းဟာလိစ်တို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်ဖြစ် သည်။ အိန္ဒိယ ပြည်တောင်ပိုင်းမှ လာရောက်သူ တမိလ်များသည် ဟိန္ဒိူများဖြစ်သည်။ တမိလ်တို့သည် ၃၀%မျှရှိသည်။ နောက်ထပ်အစုတစ်ခုက မူစလင် များဖြစ်ကြ သည်။ ၁၆%မျှ ရှိသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အုပ်ချုပ်သူတို့နှင့် တမိလ်ဟိန္ဒူ တို့စပ်ကြား တွင်စစ်ဖြစ်နေသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သည်။ တမိလ်ဟိန္ဒိူ တို့၏ အဖွဲ့က တမိလ် ကျား အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဆင်ဟာလိစ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ကို ခေါင်းဆောင်မှု ပေးသောရဟန်းတော်များကိုဓါးဖြင့် ကိစ္စတုံးပစ်ခဲ့သည့် သာဓက ရှိသလို သိဟိုရှိ စွယ်တော် မြတ်စေတိကိုပင်လျှင် ဗုံဖြင့် ဖေါက်ခဲ့သည်။
သီရလင်္ကာ ရှိမူစလင်များသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် မဟာမိတ်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓဘာ သာဝင်များနှင့်အတူ မူစလင်များမှာလည်း တမိလ်ကျားသူပုန် တို့၏ ထိုးနှက် သတ်ဖြတ်ခြင်းကို အလူးအလဲ ခံနေရရှာသည်။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငသည် မူစလင် နိုင်ငံ များနှင့် အလွန်ရင်းနှီးမှုရှိသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ထိုမျှမက သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကို မူစလင် နိုင်ငံအများအပြားက ကူညီထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိနေသည်။ ဤဖေါ်ပြ ချက်သည် မျက်မှောက်ခေတ် ဘာသာရေးဆိုင်ရာများ၏ ဆက်နွယ်မှုဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာအဆင့် ကမ္ဘာ ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပြုအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။ ယင်းကို ဂျပန်နှင့်ကိုးရီယား နိုင်ငံတို့က ဦးစီခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းအဖွဲ့တွင် ပါဝင်လှုပ် ရှားကြသော နိုင်ငံများတွင်ပါကစ္စတန်ဘင်္ဂလာဒေရှ်၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံများသည် ကြီးမားသော အနေအထားဖြင့် ပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြသည် ။ ယင်းနိုင်ငံ များသည် မူစလင် ဘာသာဝင်အများစု ရှိသောနိုင်ငံများဖြစ်နေသည်ကို သတိပြုပါ။ မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ ဗုဒ္ဓ သာသနိက အဆောက်အအုံများကို အစိုးရက ဦးစီ၍ကျကျနန ပြင်ဆင်မွမ်းမံပေးသည်။
အင်ဒိုနီးရှား ရှိ ဗောရောဗုဒ္ဓော ဘုရားကြီးကိုပြင်ဆင်ရာတွင်ယူနက်စကို အကူအညီဖြင့် IBM ကွန်ပြူတာစနစ်ကို အသုံးပြုက ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ သူတို့နိုင်ငံတွင် ဥပုသ်နေ့တါင် ရုပ်သံလွှင့်ဂြိုလ်တုမှ နေ၍ ဘုန်းတော်ကြီးများ ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို ဟောကြားသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြား သို့သွားရောက်သာသနာပြုခွင့် ပြုထားသည်။
နောက်ထပ် အကောင်းဆုံး စံနမူနာအဖြစ် စင်ကာပူနိုင်ငံကိုလေ့လာစေလိုသည်။ ယင်းနိုင်ငံသည် ခရစ်ယံ၊ မူစလင် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၊ ရှင်တို၊ ၈ျူး၊ ဟိန္ဒူ၊ ဆစ်ခ် ဟူ၍ ဘာသာပေါင်းစုံ စုပေါင်းနေထိုင်ကြသော သေးငယ်လှသော ကျွန်းငယ်လေး တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဘာသာဝင် အားလုံး လူမျိုးအားလုံး တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အထူးလေးစား စွာဆက် ဆံကြသည်။ သူတို့အတွက် အရေးကြီးဆုံးအချက်သည် ကား သူတို့နိုင်ငံတိုးတက်စေမည့် နည်းသာ လျှင်ဖြစ်သည်။ ယင်းနိုင်ငံရှိ တရုပ်၊ကုလား ၊မလေး စသည်ဖြင့် လူမျိုးအားလုံးသည် မိမိကိုယ်ကို ဆင်ဂျာပူရီ ဟူ၍ ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည် သူတို့သည် မလေးရှားလူမျိုးစု များနေထိုင်ရာ မလေးရှားနှင့် အင်ဒိုနီးရှား စပ်ကြား တွင်ဂုဏ်ရှိစွာ ဦမော့နေနိုင်ရခြင်းမျာ တူညီသော နိုင်ငံချစ်စိတ်ဓါတ်ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
Posted: 27 Jul 2012 04:05 AM PDT
မြန်မာနိုင်ငံသည် လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်း စုံငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေ ထိုင်ကြသောနိုင် ငံဖြစ်သည်။ ရှေးမြန်မာ မင်းများ လက်ထက် တွင်လည်းကောင်း၊ အင်္ဂလိပ် ကျူးကျော် စစ်ပွဲများ တွင်လည်းကောင်း၊ မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်း မှုသမိုင်းတွင် လည်းကောင်း၊ လွတ်လပ်ရေး ရရှိပြီးနောက် နိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေး ကာလ၊အိမ်စောင့် အစိုးရလက်ထက်၊ တပ်မတော် အစိုးရလက်ထက် နှင့်ယနေ့ ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲ ကာလများတွင် လည်းကောင်း ဘာသာဝင် အသီးသီးတို့သည် ကျရာနေ ရာမှ နိုင်ငံအကျိုး၊ ပြည်သူ့ အကျိုး ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည်။ လူအများစုဖြစ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၊ လူနည်းစုဖြစ်သော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မြန်မာမွတ်စလင် တို့သည် လက်ချင်းချိတ်ကာ လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ အကျိုး ရလာဒ် အဖြစ် တည်ငြိမ်သော၊ငြိမ်းချမ်းသော ၊ ဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်သော နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် မကြာခင်နှစ် များတွင် တက်လှမ်းပါတော့မည်။ဤသို့ အရှိန်ဖြင့် ချီတက်နေသောနိုင်ငံ တိုးတက်ရေးခြေလှမ်းများအကြား ခြေထိုးခံ ၊နေကြသည့် အစီအစဉ်ဆိုးများ ဆက်တိုက်ပေါ် ထွက်လာလျက် ရှိနေ သည်။ မေတ္တာတရားရှေ့ ထားလေ့ရှိကြသော လူအများစု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအကြား ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း များဖြစ်ပေါ် လာစေ ရန် သွေးထိုး လှုံ့ဆော် လာကြသည်။ နိုင်ငံ မငြိမ်မသက်ဖြစ်ပေါ် လာရာကနေ နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်မှာ ထင်ရှားလှပေသည်။ မိမိတို့ သည် မြန်မာနိုင်ငံသား များဖြစ်သည်နှင့် အညီ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေး ၊ တည်ငြိမ်ရေး ၊တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး စသော နိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေး နယ်ပယ် အသီးသီးတွင် ပါဝင်ဆောင် ရွက် ရန် မှာ မွေးရာပါ တာဝန် အဖြစ်ခံယူ ထားသည်။
အာဆီယံနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နှင့် မူစလင် ဆက်ဆံရေး ခေါင်းစဉ် ငယ်အား တင်ပြပေးပါမည်။
Posted: 27 Jul 2012 05:37 AM PDT
Selepas kontroversi slogan Sambutan Hari Kemerdekaan ke-55 'Janji Ditepati' yang didakwa hanya untuk meraih sokongan kepada Barisan Nasional (BN), kini lagu temanya turut menimbulkan persoalan yang sama.
Lagu 'Janji Ditepati' yang dimuat naik dalam laman video sosial YouTube mengandungi lirik 'Janji sudah ditepati, Kini masa balas budi'.
Slogan 'Janji Ditepati' sebelum ini mendapat reaksi negatif terutamanya Pakatan Rakyat yang mendakwa ia tidak menggambarkan kepentingan seluruh rakyat Malaysia dan hanya untuk meraih undi untuk pilihan raya.
Namun Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Datuk Seri Dr Rais Yatim dalam reaksinya berkata bukan satu kesalahan menggunakan slogan "Janji Ditepati" sebagai tema kerana ia sememangnya mencerminkan komitmen kerajaan BN menunaikan janji-janjinya. -FMT
Posted: 27 Jul 2012 03:20 AM PDT
Posted: 27 Jul 2012 03:08 AM PDT
Posted: 27 Jul 2012 03:41 AM PDT
Australian Kangaroo Jerky (Bakkua) Sucks – My friend Yiphing brought some Australian Kangaroo Jerky (Bakkwa/Bakgua) for me to try yesterday. Only then I know that the Australian makes bakgua (dried meat) too, but using the Kangaroo meat. Ewwww. Kangaroo is so cute, how can it be eaten?
That's not the main problem actually, the main thing is the taste sucks! It's just not tasty, and has the kind of weird taste, kangaroo taste? It's like the weird taste of lamb, but the it's so much stronger in the mouth. I couldn't finish it and spitted it out. Asian's bakgua jerky is still the best.
In Myanmar, we have "full" rights of religious freedom.
There are no religious discriminations.
Even most of the descendents of Muslims staying in the country for numerous generations are not issued with National Registration Cards.
Everyone is fully protected under the law.
Because of the various reasons, 300 Terrorists in Taunggope who murdered ten Muslims are not able to prosecute in the court of law.
There is freedom of job opportunity and choice of occupation.
Muslims are not allowed to work or not promoted to the middle and high ranking posts in Military and Public services.
All the citizens are entitled to have relief and care during the calamities.
Rohingyas areas are denied free access and direct donations.
We have freedom of press to even spread false news, Hate Speech, even free to use abusive vulgar language, wild accusations and threats. Press has even freedom to ignore and not to publish the numerous attacks on us, our properties and the Masjids in various places in our country. They have even freedom to call us with the derogatory names.
All the Muslim countries around the world should immediately stop all the "false" accusations on our country and should just come and visit us on the guided tour by the authorities.
Note: Please kindly stop threat and announcements or demands to our government. Just read the numerous comments under the various countries and Muslim organizations' reports in the Eleven Media news. You could read the various nasty threats back on all of you, Islam and even threatened to cut off all the Muslims' heads or to kill or kick out from Myanmar. They even wrote that they do not want to see any Muslim or Mosque on their soil.
Peace in Hearts and Minds of all of you
Peace loving Muslims living in Myanmar.
(Or the Kalar Organization, according to the way they call us in derogatory language)
P.S. Translated and added facts from FB of Royal Dynasty.
Posted: 27 Jul 2012 02:08 AM PDT
Gambar di atas: AJK PAS Pusat, Ketua Lajnah IT dan Setiausaha Majlis Syura Ulama' PAS merangkap Pengerusi Sekretariat Himpunan Ulama' Rantau Asia (SHURA) Ustaz Abd Ghani Shamsudin berucap dan menutup ucapan dengan doa di Masjid asy-Syarif Gombak
Posted: 27 Jul 2012 12:13 AM PDT
Posted: 27 Jul 2012 12:12 AM PDT
Posted: 26 Jul 2012 11:39 PM PDT
Do Project Until Party In Taylor's University Studio – As the title said, we was working onadesign project in the school's studio, then it turned up to beamini pizza party. Haha. It was3weeks ago where I was working onaArchitecture History project with my teammate – Steve, Wesley, Jia Hui and Arvin from early morning until night.
You know, when you are working on the same thing foralong period of time, your mind will tend to become slow or stunned. It's at some point that work productivity rate is so low that you can think of anything or proceed.
That time was dinner time and we ordered Pizza Hut Delivery as we were lazy to go out to buy food. It's weekend and there's not much food choices in the campus. It took me quite some times to successfully ordered my delivery online as now only I know that Pizza Hut Delivery is the new thing, it's different from the old 1300-88-2525. The menu is different from dine-in too.
One more week of holiday to go! It's so short and not enough for me. Arghh.